Fiakarana mitondra inona ? - Ny Fiangonana Presbyteriana eto Maorisy
Fiakarana mitondra inona ?
Navoaka ny 21 May 2020
Andro niakaran’ny tompo - Jaona 16.5-11
Ny dikan’ny niakaran’i jk tompo any an-danitra
1) Vitany ny iraka nampanaovin’ny ray tety an-tany
Jesoa Kristy dia nirahina hamonjy antsika @ fahaverezana mandrakizay.
Nofaranany [email protected] fomba mahagaga [email protected] fiakarany izany satria vitany tsy misy tomika ny iraka. Hoy izy : “Fa ankehitriny mankany amin’ izay naniraka Ahy Aho” (And5).
Isika koa misionera tahaka Azy. Mifalia sy mazotoa fa itokisany matoa manana andraikitra na eo @ ankohonana sy ny fiangonana ary ny firenena.
2) Nasandratry ny ray Jesoa Kristy
Jesoa Kristy dia nitondra fahoriana tokoa tety an-tany, indrindra [email protected] Herinandro masina. Fa eto kosa dia nasandratr’Atra [email protected] fombany teo imason’ny vavolombelona maro Izy. Raha [email protected] fanetren-tena lehibe no nahaterahany dia @ voninahitra lehibe kosa no niakarany sy nitsenan’ny lanitra Azy, toy ny avy nandresy an’ady. Efa nahalala mialoha izany Izy raha niteny ao @ and-10 hoe “Hankany @ Ray Aho”.
Rehefa miezaka @ iraka sy andraikitra ananantsika koa isika, na @ fianarana na @ asa, indrindra @ fanompoana ny Tompo dia omeny vokatra, fifaliana, voninahitra.
3) Tena misy fanjakan’atra any an-danitra
Tsy nofinofy na anganongano ny paradisa na ny fanjakan’ny lanitra fa tena misy. Tranon’ny Raiko no ilazan’I Jesoa Kristy azy araka ny nambarany hoe “ Ao an-tranon’ ny Raiko misy fitoerana maro . Ankehitriny, Izy mihintsy no vavolombelona fa handeha ho any, ka nahatonga Azy niteny eto @ and-10b hoe : “Tsy hahita Ahy intsony ianareo”.
Matokia fa efa nanomana fitoerana ho antsika ny Tompo raha miala ety.
4) Mbola hiverina amim-boniahitra indray izy
Tahaka ny nitenenan’ny anjely [email protected] ireo vehivavy teny am-pasana hoe
: “Tsy ato Izy fa efa nitsangana" ; no nitenenany [email protected] fahefana koa eto hoe
: “Ry lehilahy Galiliana, Iny Jesoa Izay nampiakarina niala taminareo ho
any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo Azy niakatra ho any an-danitra”. Izany hoe tena mbola hiverina avy any ambony indray ny Tompo amin’ny fara andro.
Fanontaniana apetraky ny Tompo amintsika : « Kanefa, raha avy ny Zanak’olona, moa hahita finoana etỳ ambonin’ ny tany va Izy ?”
Ry Havana, Izao no hafatry ny Tompo amintsika mpanaradia Azy :
“Handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa”. Amena.